बम विस्फोटमा संलग्नलाई कारबाही गर – Rajdhani Daily
पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन एक साता बाँकी रहँदा मुलुकका विभिन्न भागमा बम आतंक सुरु भएको छ । मंगलबार तुल्सीपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने बुधबार उदयपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा उम्मेदवार नै घाइते भएका छन् । निर्वाचनकेन्द्रित बम विस्फोटको घटनामा ७ वर्षे बालकसहित केही व्यक्ति घाइते भए पनि सरकारले आजसम्म जघन्य विस्फोटको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गरेको छैन । लगातारजस्तो बम विस्फोटको घटना भइरहँदासमेत सरकारले कारबाहीमा चासो नदेखाएको स्थिति देख्दा लाग्छ सरकार जनताको सुरक्षाको विषयमा पटक्कै संवेदनशील छैन ।
लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विधि भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचनमार्फत जनताले आफूलाई विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई चुनेर पठाउँछन् भने निर्वाचनमार्फत चुनिएका व्यक्तिले नै मुलुकको बृहत्तर हितका लागि काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय निर्वाचनकेन्द्रित बम विस्फोटको घटना भएको देख्दा लाग्छ, लोकतान्त्रि विधिमा विश्वास गर्न नसक्ने समूहमध्येकै केही व्यक्ति विस्फोटको घटनामा संलग्न छन् । विगत दुई सातादेखि लगातारजसो बम विस्फोटको घटना घटिरहे पनि घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सरकारले आनाकानी गरेकाले विध्वंसात्मक घटनामा संलग्नहरूको आत्मबल बढिरहेको छ भने विध्वंसको निशानामा निर्दोष केटाकेटीसमेत परेका छन् । विस्फोटको घटना दैनिकजसो घटिरहेको छ तर आजसम्म कसैले पनि विस्फोटको जिम्मेवारी लिएको छैन । तसर्थ लाग्छ सरकार आफैं पनि विस्फोटको योजनाकारलाई पक्राउ गर्ने विषयमा संवेदनशील छैन । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त दिनदहाडै उम्मेदवारमाथि बम प्रहार हुँदा विस्फोटमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको जानकारी सरकारले दिनुपर्ने थियो ।
जबकि नेपाल प्रहरीले सामान्य घटनामा संलग्नहरूलाई समेत पक्राउ गर्दा भिडियोसहित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्छ । तर निर्वाचन लक्षित विस्फोटको घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले आजसम्म पक्राउ गरेको सन्दर्भ सार्वजनिक भएको छैन । यी घटनाले नेपाल प्रहरीको अकर्मण्यता मात्रै पुष्टि गर्दैन सरकारको लाचार प्रवृत्ति पनि प्रस्ट पार्छ । होला कुनै पनि समूहलाई सरकारको वर्तमान कार्यशैली मन नपरेको हुन सक्छ । यसको अर्थ यो होइन कि सरकारको विरोधस्वरूव सर्वसाधारण लक्षित बम प्रहार गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त समूहको भनाइ मानेन त ७ वर्षे बालकको के दोष ? अर्को कुरा हरेक समस्याको समाधानको अन्तिम बिन्दु संवादबाहेक अरू हुनै सक्दैन ? अहिलेसम्मकै ठूलो आन्दोलन सशस्त्र युद्ध त वार्ताबाटै सम्पन्न भयो भने त्यस्तो ठूलो माग के छ, जुन संवादबाट पूरा गर्न सकिँदैन ? विस्फोटजस्तो जघन्य घटनामा संलग्नहरू जुनसुकै दलका किन नहुन्, तिनलाई सशक्त कारबाही हुनैपर्छ । आपराधिक घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नका लागि अन्य दलले समेत सरकारलाई सघाउनुपर्छ ।